Tahriibayaal ay Somali ku jiraan oo ku xayiran dhulka halaq-galeenka ee dalka Panama – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dhallinyarro da’ yar oo u kala dhalatay dalka Somalia, Pakistan, Kuuba iyo Ghana ayaa la sheegay inay ku xayiran yihiin dhul-kaymeed bahal-galeen ah oo ku yaalla dalka Panama, waxayna Dhallintaasi doonayaan inay Tahriib ahaan ku gaaraan xuduudka dalka Maraykanka.
Tahriibayaasha ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin Gobalka Darin Gap ee la sheegay inuu yahay Gobal oomane ah, isla markaana aan waddooyin lahayn
Tahriibayaasha ayaa la sheegay inay khatar ugu jiraan masaska, Kaneecadda gudbisa Maalariyadda iyo Jiirka ama Doolliga dadka cuna.
Tahriibe Somali oo lagu magacaabo Ahmed Hassan oo 26-jir kana mid ah Tahriibayaashii horey uga gudbay dalka Panama , kuna sugan dalka Maraykanka ayaa sheegay inuu sannadkii hore ka soo qaxay Somalia, kadibna uu Kenya ka soo dhaafay.
Axmed Hassan oo bishi iMaarso galay Maraykanka ayaa sheegay inaan dhulka kaymaha ee Panama si fudud looga soo gudbi karin, wuxuuna sheegay inaysan biyo lahayn, balse ay ku badan yahay masaska.
Ahmed Hassan ayaa sheegay inuu mas ka qaniinay lugta intii uu ku soo tahriibayey Kaymaha dalka Panama, balse uu ka badbaaday qaniinyadda maskaasi.
Waxa uu tilmaamay in Gobalka Darien Gap ee dalka Panama yahay meel khatar ah, oo ay Tahriibayaasha ku adag tahay inay si sahlan kaga soo gudbaan Kaymaha fara badan ee qariyey Gobalkaasi.
Tahriibayaasha ka gudba dalka Panama ayaa la sheegay inay u sii gudbaan dalka Meksiko, kadibna ay gaaraan xuduudka Maraykanka.
Dadka ka shaqeysta Isxambaarka ee dadka u tahriibiya Maraykanka ayaa la sheegay inay Tahriibayaasha u fureen jid cusub, si ay u gaaraan Maraykanka.
Tahriibayaasha marka ay yimaadaan Koonfurta Qaaradda Maraykanka, waxay ku khasban yihiin inay ku soo tahriibaan dhulka kaymaha ee Panama ama inay lacag siiyaan Burcad dadka doonyaha Kalluumeysiga kaga gudbiya Webiga Panama.
Boliska dalka Panama ayaa la sheegay inay sannadkan diiwaan geliyeen ku-dhawaad 3,800 oo Tahriibayaal, oo 1,000 ka mid ay ka soo gudbeen hdulka kaymaha.
Inta badan Tahriibayaasha oo codsiga Magangelyo-doonka isku diiwaan geliya, ayaa waxay badankooda sii wataan inay safarkooda sii wataan ilaa ay ka gaaraan xuduudka Meksiko la wadaago Maraykanka.
Dhinaca kale, Saraakiisha Socdaalka iyo kuwa Garsoorka ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inay wax ka qaban doonaan Jidka Tahriibayaasha soo maraan, si ay ugu soo
Nin Somali ku eedeysnaa Kufsi oo lagu xukumay Maraykanka